Wararka Maanta: Jimco, Nov 26, 2021-Faahfaahino kasoo baxaya dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanada Yoontoow iyo Cabadalla Bitoole oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka ayaa bilaawday kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen Saldhigyada ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanada Yoontoow iyo Cabdalla Bitoole, waxaana dadka deegaanadaasi ay warbaahinta u sheegeen in dagaalka uu ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanada Yoontoow iyo Cabdalle Bitoole ee gobolka Jubbada Hoose ee u dhaxeeyay Al-shabaab iyo ciidanka Jubbaland.
Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland oo ka hadlay dagaalka waxay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla mar ahaantaana ay u geysteen khasaare xoogan.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa inta badan weeraro joogto ah ku qaada Saldhigyada ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.